Imbuyekezo kunye noMgaqo-nkqubo wokurhoxisa umrhumo
Jonga yethu Policy Refund iphepha leenkcukacha kwimbuyiselo, kunye nokucima ubhaliso lwakho.
Ziziphi iinkcukacha esiziqokelelayo?
Siqokelela ulwazi kuwe xa ubhalisa kwincwadana yethu.
Xa usenza iodolo okanye ubhalisa kwindawo yethu, njengoko kufanelekile, unokucelwa ukuba ufake: idilesi ye-imeyile okanye ulwazi ngekhadi letyala.
Sisebenzisa ntoni ulwazi lwakho?
Naluphi na ulwazi oluqokelelwa kuwe lungasetyenziswa ngenye yeendlela ezilandelayo:
Ulwazi lwakho, nokuba lukarhulumente okanye lolwangasese, aluyi kuthengiswa, lutshintshwe, luhanjiswe, okanye lunikezwe nayiphi na inkampani ngesizathu nasiphi na isizathu, ngaphandle kwemvume yakho, ngaphandle kwenjongo ecacileyo yokuhambisa umkhiqizo othengiweyo okanye inkonzo eceliwe.
- Ukuthumela ii-imeyile ngamaxesha athile
Idilesi ye-imeyile oyinikelayo inokusetyenziselwa ukuthumela ulwazi, ukuphendula imibuzo, kunye / okanye ezinye izicelo okanye imibuzo.
Sinokukhusela njani ulwazi lwakho?
Sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokhuseleko ukugcina ukhuseleko lweenkcukacha zakho xa usenza iodolo
Sinikeza ukusetyenziswa kwe-server ekhuselekileyo. Zonke iinkcukacha ezithintekayo zengqondo / zekhredithi zithunyelwa ngeTeknoloji yeSecurity Socket Layer (SSL) ubuchwephesha kwaye zifakwe kwi-database yethu yokubonelela ngeenkonzo zentlawulo kuphela ukuba zifikeleleke kulabo abagunyazisiweyo ngamalungelo akhethekileyo okufikelela kwiinkqubo ezinjalo, kwaye kufuneka bagcine ulwazi oluyimfihlo.
Emva kwentengiselwano, ulwazi lwakho lwangasese (amakhadi etyala, iinombolo zokhuseleko loluntu, imali, njl.) Aziyi kugcinwa kumaseva ethu.
Ngaba sisebenzisa iikhukhi?
Ewe (ii-Cookies ziifayile ezincinci eziza kugqithiselwa kwisiza okanye umboneleli ngenkonzo yakhe kwiikhompyuter yakho kwi-browser yakho yeWebhu (ukuba uyavumela) eyenza iisayithi okanye iinkqubo zababoneleli beenkonzo zikwazi ukubona isikhangeli sakho kwaye zibambe kwaye zikhumbule ulwazi oluthile
Sisebenzisa ii-cookies ukusinceda sikhumbule kwaye senze izinto kwiinqwelo zakho zokuthenga, uqondisise kwaye ulondoloze iinketho zakho zokutyelela ngokuzayo kwaye uqokelele ulwazi olubanzi malunga nesayithi yendlela kunye nokusebenzisana kwendawo ukuze sikwazi ukubonelela ngamathuba amaziko angcono kunye nezixhobo kwixesha elizayo.
Yonke intsebenzo kunye / okanye amashishini kunye / okanye abathengi be-VIP abanalungelo lokufumana imali, ngokunyanzeliswa ngokungqongqo. Oku kungenxa yokuba yinkonzo ye-intanethi kwangoko. Iprosesa yethu yokuhlawula i-100% ikhuselekile kwaye isemthethweni, kwaye akukho zindleko ziya kwenziwa ngaphandle kwemvume yabathengi ngexesha lokuthenga.
Sinelungelo lokwala inkonzo ye-YTpals kubasebenzisi abaxhaphaza inkqubo
Ngaba sichaza nayiphi na inkcazelo kumaqela angaphandle?
Asithengisi, ukuthengisa, okanye ukutshintshelwa kwamanye amaqela ngaphandle kolwazi lwakho oluchongiweyo. Oku akubandakanyi abantu abathathu abathembekileyo abasinceda ekusebenzeni iwebsite yethu, senza ibhizinisi lethu, okanye sikhonze, ngokude nje ukuba lawo maqela avuma ukugcina le ngcaciso imfihlo. Sinokukhupha ulwazi lwakho xa sikholwa ukuba ukukhululwa kulungile ukuthobela umthetho, ukunyanzelisa imigaqo-nkqubo yethu, okanye ukukhusela amalungelo ethu okanye amanye amalungelo, impahla okanye ukhuseleko. Nangona kunjalo, ingcaciso engabonakali yindwendwe ingabonelelwa kwamanye amaqela ukuthengisa, ukuthengisa okanye ezinye izinto ezisetyenziswayo.
Ikhonkco lenkampani yesithathu
Ngamanye amaxesha, ngokuqonda kwethu, singabandakanya okanye sinikeze iinkonzo zomntu wesithathu okanye iinkonzo kwiwebhusayithi yethu. Ezi zizahlulo zesithathu zineenkqubo ezizimeleyo kunye ezizimeleyo zobumfihlo. Ngoko ke akukho mthwalo okanye uxanduva kumxholo kunye nemisebenzi yalezi ziza ezixhunyiwe. Nangona kunjalo, sifuna ukukhusela ingqibelelo yesayithi yethu kwaye samkela nayiphi na ingxelo malunga nalezi ziza.
Lo mgaqo-nkqubo weMigaqo-nkqubo kwi-Intanethi usebenza kuphela kulwazi oluqokelelwe kwiwebhusayithi yethu kwaye lungafakwanga ulwazi oluqokelelwe ngaphandle kweintanethi.
Ngokusebenzisa indawo yethu, uyavuma ukuba ufumane imiMiselo yeNkonzo yethu kwi-Intanethi.
Utshintsho kwiMigaqo yeNkonzo yethu
Ukuba sithatha isigqibo sokutshintsha iMigaqo yeNkonzo, siya kuthumela olo tshintsho kweli phepha.